मेरी बास्सैमा फर्किए धुर्मुस सुन्तली
काठमाडौं, चैत १६ – मेरी बास्सैमा सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीलाई नदेखिने हो कि भनेर निराश भएका दर्शकलाई खुसीको खबर छ ।
‘चपली हाइट २’ विदेशमा ४० लाखमा बिक्री
चैत्र ८, २०७२- यतिबेला छायांकनमा रहेको फिल्म ‘चपली हाइट २’ लाई हाइलाइट्स नेपालले ४० लाख रुपैयाँमा देश बाहिर प्रदर्शनको सम्पूर्ण अधिकार किनेको छ ।
बदाम बेच्दै र भाँडा माझ्दै हिँड्ने काभ्रेली ठिटो यसरी भए सेलिब्रेटी
काठमाडौं, चैत ३ – बुद्धि तामाङ, दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गर्ने चलचित्र छक्का पञ्जामा अनुबन्ध भएका छन् । कबड्डी र कबड्डी कबड्डीमा उनले गरेको अभिनयले दर्शकको मन छोयो । उनले ती सिनेमामा बोलेको थेगो हैट ! दर्शकमाझ चर्चित बन्यो । बुद्धिले कबड्डी र कबड्डी कबड्डीसँगै त्यान्द्रोमा पनि दयाहाङ राईसँग अभिनय गरे ।
‘वादशाह’लाई नेपाल ल्याउन ६५ लाख खर्च
२०७२ चैत २ बलिउडका चर्चित र्‍यापर वादशाह(आदित्य प्रतिक सिंह) नेपाल आउने भएका छन् ।
श्रीकृष्णको अन्तिम फिल्म भन्दैमा आउलान त दर्शक ?
२०७२ फागुन ३० गते काठमाडौं । दीवंगत अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अभिनित अन्तिम चलचित्र ‘इन्द्रावती’ को टे्रलर सार्वजनिक भएको छ ।
बलिउडका ‘वादशाह’ होली खेल्न नेपाल आउने
२०७२ फागुन २६- बलिउडका चर्चित र्‍यापर तथा पाश्र्व गायक बादशाह आउँदो फागू पूणिर्मामा काठमाण्डौ आउने भएका छन् । उनले यस पटक आफ्ना फ्यानहरुसँग रङ खेल्दै उनीहरुलाई नचाउने भएका हुन् । नाजी इन्टरटेन्मेन्टको मुख्य आयोजना र युहान इन्टरनेशनल इभेन्टस्को सह-आयोजनामा हुने ‘बादशाह लाईभ इन नेपाल’ म्युजिक कन्सर्टमा उनी नेपाली प्रशंसक माझ प्रस्तुत हुने भएका छन् ।
करिश्मालाई फापेन फिल्म, के राजनीति फाप्ला ?
फागुन २३ आफुलाई प्रेस शो नफाप्ने भन्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले बनाएको चलचित्र ‘फागु सामान्य शैलिमा प्रदर्शन गरिन् । प्रदर्शनको शैलि सामान्य भएपनि ब्यापार अब्बल होला भन्नेमा आशावादी थिइन् । उनका शुभचिन्तकदेखि चलचित्रमा काम गर्ने प्राविधिकले समेत फिल्म राम्रो छ भनेर दाबी गरेका थिए । तर, दर्शकले उनको फिल्मलाई मन पराइदिएनन् । फागुको नतिजा देखेपछि करिष्मालाई प्रेश शो मात्रै हैन निर्मात्री भन्ने पद नै नफाप्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् केही कलाकर्मीले ।
स्टेज तताएरै मालामाल भएका ज्योति मगरदेखि कोमल ओलीसम्मका लोकगायिका
फागुन २३ – हिजोआज पहिले पहिले जस्तो गीतका सिडीहरु बिक्री हुँदैनन् । न त कुनै कम्पनीले एल्बम खरिद नै गरिदिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गायक, गायिकालाई खासै चिन्ता छैन । किनकी उनीहरु स्टेजबाटै लगानी उठाउन सक्छन् । देश विदेशमा साँस्कृतिक कार्यक्
यस्ता छन् जेल जीवन बिताउने बलिउड कलाकार
२०७२ फागुन २२ गते मुम्बई । अभिनेता सञ्जय दत्त यरवदा जेलवाट रिहा भएका छन् । पाँच वर्षको सजाय पाएका सञ्जय ५७ महिना जेल बसे । जेलभित्र राम्रो आचरण देखाएको कारण तीन महिना अघि नै छुट्टी पाए । सञ्जय मात्रै होइन् बलिउडमा त्यस्ता धेरै कलाकार छन् जो केही समय जेल बसेर आएका छन् । हेरौं यसरी जेल जीवन बिताउने को( को रहेछन्ः
‘कल गल’ बन्नु नायिकाका लागि चुनौतीपूर्णः शिल्पा पोख्रेल
२०७२ फागुन २१ गते चलचित्रमा काम गर्नुअघि नायक आर्यन सिग्देलको फ्यान थिइन् शिल्पा पोखरेल । जतिवेला उनी म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त थिईन् उनलाई चलचित्रका कलाकार ठूला लाग्थ्यो । त्यसमाथि आर्यन सिग्देललाई सुपरस्टार देखेकी थिइन् । ‘आर्यनसँग काम गर्न पाए कति रमाईलो हुन्थ्यो होला ?’ पटक पटक सोचेकी थिइन् । पहिलो पटक आर्यन अभिनित चलचित्र ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ आमासँग हलमै गएर हेरेकी शिल्पा त्यसपछि आर्यनको झन् ठूलो फ्यान भइन् । ‘मलाई त उहाँको अभिनय निकै मन पर्‍यो । उहाँको कुनै पनि चलचित्र छुटाइन ।’ अहिले पनि आर्यनको चलचित्रलाई विषेश प्राथमिकता दिने गरेकी छिन् ।